Disinfection nke ọkụkọ coop: esi edozi ọkụkọ coop n'ụlọ - Ugbo ala ugbo - 2020
Disinfection ọkụkọ coop n'ụlọ
Ọrịa na anụ ọkụkọ nwere ike ịkpata ọnwụ nke nnụnụ niile. Mgbochi kachasị mma maka ọdachi dị otú ahụ bụ disinfection oge nke ọkụkọ coop. Tụkwasị na nke a, a ga-achọ usoro dị otú ahụ n'oge ọgụ a na-alụ megide ọrịa nwere ike ime. Tụlee ụdị disinfection, yana usoro nke mmejuputa.
Ihe na otu esi eme
Ngwọta sitere na nje nje
Mgbochi n'ime ụlọ ọkụkọ
Kedu ihe bụ disinfection
Iji malite, anyị na-akọwa echiche ahụ. Disinfection bụ usoro nke nwere ike ibibi (ma ọ bụ belata ịta ahụhụ na nchekwa dị mma) ọrịa ọrịa, nje na toxins. Nke ikpeazụ a na-ezo aka n'ụdị dị iche iche nke poisons nke sitere na mmalite.
Ị ma? Ime ka a ghara ịgwọ ọrịa nke ụbọ akwara site n'ịgwa ha ọkụ bụ iwu maka ndị dọkịta Rom. A kwenyere na n'ụzọ dị otú a, a na-ebibi akụ nke Apollo, n'ihi na chi a, n'etiti ihe ndị ọzọ, bụ maka ịta ndị mmadụ ahụhụ site na izigara ha ọrịa.
Vidio: ikpochapu ọkụkọ coop
Enwere ụdị disinfection dị iche iche: mmiri mmiri, na-eji akwọ mmiri ma na-eme n'ihu nnụnụ n'ime ụlọ ọkụkọ. Tụlee ihe ndị a n'ụzọ zuru ezu karị.
Usoro a na - agụnye mmiri mmiri na - ekpochapu mmiri n'ime oghere dị n'ime ọkụkọ coop (na - enweghị nnụnụ) site na iji sprayer ma ọ bụ ihe yiri ya. A na-ebido nnụnụ ahụ na ọkụkọ coop mgbe ọnyá ahụ pulitere.
Usoro a yiri nke gara aga, ọ bụ naanị disinfectant na-adịghị sprayed, ma sprayed dị ka aerosol nkwusioru. Maka nke a, a ga-eji ihe mgbochi ma ọ bụ egbe egbe. Na mgbakwunye, igwe ojii aerosol nwere ike ịmalite n'ihi mmeghachi omume nke mmiri. Enweghị ọdịiche dị iche na disinfection mmiri.
A na-akpọ usoro a nhazi. Maka o jiri ihe nchekwa kachasị mma maka nnụnụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ejikarị ha eme ihe dị ala iji ghara imerụ ndị bi na coop. N'adịghị ka a na-agwọ ụlọ efu, arụmọrụ nke nhazigharị dị elu. Disinfection n'onwe ya nwere ike ịbụ ma mmiri na aerosol.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ banyere esi rụọ ọkụkọ coop maka oge oyi, ụdị ọkụ ọkụ kwesịrị ịdị na ọkụkọ coop n'oge oyi, otu esi eme ka ventilash na ya, nakwa otu kacha mma iji kpoo ọkụkọ coop n'oge oyi.
A na-eji ọgwụ dị iche iche eme ihe dị ka ndị na-edozi ahụ. O nwere ike ịbụ ihe dị iche iche na-akwado mmepụta mmepụta ihe, na ndị na-edozi ọrịa na-edozi onwe ha.
Ọ dị mkpa! A na-atụ aro na ị na-arụ ọrụ na disinfection nke coop na-eji nke nchekwa nchekwa: ị ga-eji respirator na globa gloves.
Ngwá ọrụ dị irè nke ụdị a bụ ngwakọta nke ịcha ọcha na nchara. Maka imepụta nke ngwakọta na-ewere 1 akụkụ turpentine na 4 akụkụ ịcha ọcha. 0,5 ml nke turpentine na 2 g nke ịcha ọcha na-ekesa iji hazie otu cubic mita nke ụlọ nke ọkụkọ coop.
Anyị na-akwado ịgụ banyere otu esi ewu ma kwadebe ọkụkọ ọkụkọ, yana ịkwanye ọkụ, ogige, aviary, efọk, nri nri na onye na-aṅụ ihe ọkụkọ.
Mgbe ị na-agwakọta ihe abụọ ahụ, mmeghachi omume na-amalite na igwe ojii dị iche iche, disinfecting ụlọ. A pụghị ịkwadebe ngwakọta ahụ n'otu akpa, ma na abụọ ma ọ bụ karịa - n'ụzọ dị otú a, a na-enweta nkesa edozi nke aerosol.
Usoro a na-ewe ihe dị ka minit 30. Enwere ike ime ya n'ọnọdụ ikuku ikuku nke ụlọ. A na-eme usoro ahụ otu ugboro n'ụbọchị maka 3-4 ụbọchị n'ọnwa. Enwere ike ime nhazi n'ihu nnunu. A pụrụ ịkọwa bọmbụ na-acha ọkụ si n'usoro aerosol. Karịsịa, ndị na-enyocha sulfur "Climate" na "Fas" bụ ndị a ma ama. Otú ọ dị, na-eji ọgwụ ndị a eme ihe, ị ga-echeta banyere atụmatụ ha. Enwere ike iji ha na ụlọ ọkụkọ na-enweghị ihe ọ bụla, ọ ga-abụrịrị na a ga-ewepụ ụlọ ahụ maka ọ dịkarịa ala otu izu, anwụrụ ọkụ n'onwe ya bụ nsi ma nwee ísì ọjọọ.
Mụta otu esi enweta fleas na coop.
Ịmepụta nsị dị mma nke anwụrụ ọkụ ga-emechi ihe niile dị n'ime ụlọ ahụ. Ọgwụ ọjọọ na-eme na ero, ebu, ụmụ ahụhụ, ma ọ bụghị na ndị na-efe efe.
Ị ma? A na-eji sulfụ mee ihe maka nsị nke ụlọ na ndị ọrịa na oge ochie, ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ narị afọ BC. er A na-eme ya n'Ijipt, India, Gris, Rom. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji ọgwụ dịgasị iche iche mee ka ebe obibi ahụ kwụsị.
Sodium hypochlorite (sodium hypochlorous acid), nke a pụrụ ime onwe ya, nwere ezigbo disinfecting Njirimara. Iji mee nke a, mee ngwọta na ọnụọgụ nke 200 g nke ịcha ọcha na soda ash kwa liter nke mmiri.
Ọ ga-adọrọ mmasị ịgụ banyere otu esi họrọ ezigbo ọkụkọ coop mgbe ịzụrụ, nakwa otu esi eme ka ọkụkọ coop si na griin ha.
Nmeghachi ahụ dị maka awa 24, akpa 5-6 awa ihe ngwọta aghaghị ịkpali kwa oge. Ihe ngwọta nke a na-ebibi nje microhoganic pathogenic, ọ nwere ike na-atụgharị ma ọ bụ na-efesa ya. A na-eme ọgwụgwọ kwa izu na enweghị ọkụkọ.
Nagide nje virus, ọ ka mma iji ọgwụ ọjọọ eme ihe. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, "Nwunye ọchụ" na-ebibi nje, bacteria na dịkwa ka usoro. Ọ bụ mmiri na-etinye uche na mmiri ga-agbaze n'ime mmiri maka ojiji. A na-eme ngwọta ọrụ dịka ntuziaka ahụ si dị. A na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe maka ọgwụgwọ mmiri na aerosol, kwere ka o jiri ya mee ihe n'ihu ụmụ anụmanụ. Mgbe nhazi, ọganihu nke ọrịa ahụ na-eme ka ọ bụrụ ọnwa isii.
Ụzọ ndị ọzọ nke mmepụta mmepụta ihe nwere ụdị mmetụta ahụ na usoro nke eji: Bianol, Ecocide C, Bromosept, wdg. Mgbe ha na-eji ha, ọ dị mkpa iji soro ntuziaka ndị a, nke a na-eme ka o doo anya na ngwaahịa ndị a adịghị emerụ ahụ ike nke ụmụ anụmanụ.
A na-eji ngwọta nke mmiri chloric na-emeso otu ọkụkọ ọkụkọ. A na-ere ọgwụ na ngwakọta a kwakọbara. A na-eri ya dị ka ntụziaka dị na pelvis ma ọ bụ na akpa yiri ya ma hapụrụ n'ụlọ nne ọkụ maka otu ụbọchị.
N'oge a, chlorine vapo na-enye disinfection dị elu. Enwere ike ịnọ n'ihu nnụnụ ahụ n'oge usoro ahụ, ya mere, ọ ka mma ime ya n'ihu nkwụ ọkụ ọzọ. Mgbe usoro ahụ gasịrị, ime ụlọ ahụ aghaghị igosipụta ya.
Ndị na-ahụ maka nrịanrịa dị mma na-agụnye ndị na-achọ nrịdine (dịka ọmụmaatụ, Dix), nke a pụrụ iji mee ihe na enweghị ma ọ bụ n'ihu nnụnụ. Usoro nchịkwa ahụ na-ewe site na minit 30 ruo awa 3, ebe a na-ebibi ihe ndị na-eme ka ọrịa na-ebibi ọrịa, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, a na-egbochi mmepe ha.
Video: nhazi otu ọkụkọ coop na Dixam Usoro nhazi na ọnụ ọgụgụ usoro na-adabere na ọnọdụ a kapịrị ọnụ: mgbochi n'ihu nnụnụ ma ọ bụ disinfection na ha enweghị. A na-akọwacha nhọrọ niile maka iji otu "Dixam" ahụ n'ụzọ zuru ezu na ntụziaka maka iji ngwá ọrụ ahụ.
Gụkwuo ihe kpatara ọkụkọ ji egwu ibe na oke akuko, gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọkụkọ adịghị agba ọsọ ma na-akwa àkwá, gịnị kpatara ọbara dị na nsen anụ ọkụkọ, ị chọrọ akuko iji ebu nsị mgbe ogige ndị na-eto eto amalite ịsọ ọsọ.
E nwekwara ọgwụ "Monclavit-1", nke a na-adabere na iodine ma nwee bactericidal, fungicidal na antiviral. Otú ọ dị, maka nhazigharị nke ọkụkọ coop na enyemaka nke Monklavit, a ga-achọ igwefụfụ mmiri na-ekpo ọkụ, ya mere ngwá ọrụ a bara uru, kama maka nnukwu ugbo.
Mgbe ị na-eji disinfectant ọ bụla, ọ dị mkpa iji mee usoro omume, ya bụ:
mbadamba, na-awụba n'oké osimiri, feathers, ọ bụla awụba n'oké osimiri na-ewepụ si ọkụkọ coop;
ala, mgbidi, ụlọ, perches, windo, ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ndị na-eri nri;
a na-emeso ụlọ ahụ ọrịa na-ekpocha ọrịa ma debe ya n'oge kwesịrị ekwesị;
a na-asacha ọkụkọ coop (iji ọgwụ eme ihe anaghị achọ ka a saa ya) ma gbaa ya ọkụ;
a na-eme ka ụlọ ahụ dị ọcha, a na-edozi ihe ndina ọhụrụ ahụ.
Ghota onwe gi site na nhoro na ojiji nke ihe ndi ozo di iche iche.
Ọ dị mkpa! Ọnụnọ nri nke nnụnụ n'ime ụlọ ahụ a na-emeso na-ebelata uru nke ụzọ eji.
Iji belata ọrịa ọrịa ozuzu okuko, ị nwere ike itinye ihe mgbochi ndị a:
ọgwụgwọ oge nke ụlọ ahụ na ndị na-edozi ahụ;
na-ekuku ụlọ ahụ, tinyere ezigbo ventilashị iji gbochie oke iwe mmiri;
eji ngwa ngwa, nke ịchọrọ iji kpuchie ala ma kpuchie ya na ihe ndina;
na-acha ọcha na mgbidi.
N'ịkọ elu, a pụrụ ịkọwapụta na disinfection nke chicken coop bụ n'ụzọ nkà na ụzụ adịghị nsogbu, na uru ya dị ukwuu. Maka usoro a, ị nwere ike iji ngwaahịa dị njikere ma ọ bụ kwadebe disinfectants onwe gị. Ma ọ bụrụ na ọ nweghị ohere iji mee ya n'onwe gị, ị nwere ike iji ọrụ ndị ọkachamara mee ihe mgbe niile.
Maka mbibi nke nje nje n'ime ime ụlọ, a na-eji ụdị acaricidal dị iche iche: diazinon (0.5-1%), sevin (1%), stomazan (0.025-0.05%) na ọtụtụ ahụhụ ụmụ ahụhụ ndị ọzọ dịka ntụziaka ha si eji. A na-emeso ala, ụlọ na akụrụngwa site na ịpị ha na ọnụego 100-300 ml / m2, dabere na nkwadebe na ebe ebe a na-emeso ya tupu ha edozi n'ime ụlọ ahụ, ha na-ejupụta na mgbagwoju, mgbawa, oghere, na-emeso ha na acaricides nke ụba elu (ọkacha mma na mmanụ). A na-etinye nkwupụta ụda A na-eme ya na enweghị anụmanụ na ndị mmadụ, na-esite n'ikuku (ma ọ dịkarịa ala 3-4 awa); a na-asa mmiri na ndị na-aṅụ mmiri na mmiri ọkụ.
N'ọnọdụ nke ọkụkọ, a na-eji iodine monochloride + aluminum powder site sublimation na nzube nke disinfection; Neostomazan na-edegharị maka nzube nke disinsection na disaccharization.
Ọrịa Virotsid (M na-arụ ọrụ otu ugboro n'ọnwa) Inkur ụmụ ahụhụ (ugboro abụọ n'ọnwa na ụbọchị okpomọkụ) Ọ ka mma ka ọkụ ma ọ bụrụ na ohere dị otú ahụ dị
Kedu ka esi esi nri kọlịflawa nke ọma na nke dị ụtọ na Korea: ntụziaka nzọụkwụ site na nzọụkwụ maka letus, efere n'akụkụ na marinade
Alycha Naiden - nkọwa na ịkụ
Ama okooko osisi nke bulbous Hippeastrum ezinụlọ: iche, iche, foto
Isi abuba: ihe bara uru, otu esi agbaze, ihe ime ya
Esi kwadebe sea buckthorn maka oyi: nhọrọ nke kacha mma ntụziaka